Halyeeyga Marco van Basten oo sheegay halka ay daciif ka tahay kooxda Liverpool – Gool FM
(Yurub) 01 Dis 2021. Halyeeyga kubadda cagta Holland iyo kooxda Ajax Amsterdam ee Marco van Basten, ayaa xaqiijiyay in kooxda reer Holland ay tahay inay ka faa’iideysato daciifnimada Liverpool kulanka ay ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League.
Kooxda Liverpool ayaa isku diyaarineysa inay ku soo dhaweyso naadiga Ajax Amsterdam caawo oo Talaado ah garoonkeeda Anfield, ciyaar qeyb ka ah kulamada shanaad heerka group-yada ee tartanka Champions League.
Liverpool ayaa ciyaareysa kulankan, iyadoo ay ka maqan yihiin daafacyadeeda muhiimka ah, ee Joe Gomez iyo Virgil van Dijk, taasoo ah wax Marco van Basten uu u rajeynayo inay ka faa’iideysan doonaan kooxda heysata horyaalka Holland ee Ajax.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa daabacay wareysiga Halyeeyga Marco van Basten, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Hadda waxay heystaan tiro kale oo daafacyo ah, runtiina qaladaad ayey sameynayaan.”
Isagoo hadalkiisa sii wata Halyeeyga kubadda cagta Holland iyo kooxda Ajax Amsterdam ee Marco van Basten ayaa wuxuu yiri:
“Difaaca ma ahan meesha ay ka awood badan tahay Liverpool xilligan la joogo.”
Si kastaba ha noqotee, Liverpool ayaa hoggaanka u haysa Group-ka D iyaga oo leh 9 dhibcood, kooxaha Ajax iyo Atalanta ay ku jiraan kaalmaha labaad iyo saddexaad iyaga oo leh 7 dhibcood, halka Midtjylland ay tahay kooxda ugu hoseysa dhanka kala horeynta Group-kan maadaama aysan laheyn wax dhibco ah.